एचटीएमएल स्क्रैपिंगका लागि सेल्टल्ट विशेषज्ञ परिभाषित विकल्पहरू
इन्टरनेटमा थप जानकारी. वेबसाइटहरू HTML को प्रयोग गरेर लिखित छन्, र प्रत्येक वेब पृष्ठ विशेष कोडहरूसँग संरचित छ. विभिन्न गतिशील वेबसाइटहरू CSV र JSON ढाँचाहरूमा डेटा प्रदान गर्दैन र यसले हामीलाई ठीकसँग जानकारी निकाल्न कठिन बनाउँछ. यदि तपाईं एचटीएमएल कागजातबाट डेटा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न प्रविधिहरू सबैभन्दा उपयुक्त छन्.
एलएक्सएमएल एक विस्तृत पुस्तकालय हो जुन छिट्टै एचटीएमएल र एक्सएमएल कागजातहरू पार्सिङका लागि लेखिएको छ।. यसले ठूलो ट्याग, एचटीएमएल कागजातहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ र मिनेटको कुरामा तपाइँलाई चाहेको परिणाम प्राप्त गर्दछ. हामीले भर्खरै निर्मित बनाइएको URL मा मोडलहरू पठाउनु पर्छ जुन यसको पढ्नको लागि उपयुक्त र सही परिणामका लागि ज्ञात छ।.
सुन्दर सूप एक पायथन लाइब्रेरी हो जसको लागि द्रुत गतिरोध परियोजनाहरु जस्तै डेटा स्क्रैपिंग र सामाग्री खनन. यसले स्वचालित कागजातहरू युनिकोडमा र बाहिर जाने कागजातहरूलाई UTF मा बदल्छ. तपाईंलाई कुनै पनि प्रोग्रामिंग क्षमताको आवश्यकता छैन, तर एचटीएमएल कोडहरूको आधारभूत ज्ञान तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्नेछ. सुन्दर सूपले कुनै पनि कागजात पाउँछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूका लागि रूख ट्राभर्सल सामान गर्दछ. खराब डिजाइन गरिएको साइटमा बन्द हुने मूल्यवान डेटा यस विकल्पसँग स्क्रैप गर्न सकिन्छ. साथै, सुन्दर सूपले केवल केहि मिनेटमा ठूलो स्क्रैपिंग कार्यहरू गर्दछ र तपाइँले एचटीएमएल कागजातबाट डेटा प्राप्त गर्नुहुन्छ. यो MIT द्वारा इजाजतपत्र हो र दुवै पाइजोन2र पाइजन3मा कार्य गर्दछ.
स्क्रैप एक अलग ओपन स्रोत फ्रेमवर्क हो जसको तपाईंलाई विभिन्न वेब पेजहरु को आवश्यकता हो. यो सर्वोत्तम हो कि यसको निर्मित मेकेनिज्म र व्यापक विशेषताहरु को लागि. स्क्रैप संग, तपाईं सजिलै संग धेरै साइटहरु देखि डेटा निकालन गर्न सक्छन् र कुनै विशेष कोडिंग कौशल को आवश्यकता छैन. यसले तपाईंको डेटा Google ड्राइभमा आयात गर्छ, जेएसओएस, र CSV ढाँचाहरू सजिलैसँग र धेरै समय बचत गर्छ. स्क्रैप आयात गर्न राम्रो विकल्प हो. io र किमोनो ल्याब्स.
PHP सरल एचटीएमएल डोम पार्सर:
PHP सरल HTML डोम पार्सर प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट सुविधा. यसले दुवै जाभास्क्रिप्ट र सुन्दर सूपको सुविधाहरू जोड्दछ र ठूलो संख्यामा वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्टहरू सँगै सञ्चालन गर्न सक्दछ।. तपाइँ यस प्रविधिको साथ HTML कागजातबाट स्क्रैप डेटा सक्नुहुन्छ.
वेब फसल एक खुल्ला स्रोत वेब जावामा लेखिएको स्क्रैपिंग सेवा हो।. यसले सङ्ग्रहित वेब पृष्ठहरूबाट डेटा व्यवस्थित गर्दछ र स्क्रैप गर्दछ. वेब फसलले XML हेरफेरको लागि स्थापित प्रविधि र प्रविधिहरू जस्तै नियमित अभिव्यक्तिहरू, XSLT र XQuery. यो एचटीएमएल र एक्सएमएल-आधारित वेबसाईटहरूमा फोकस गर्दछ र उनीहरूको गुणस्तरमा सम्झौता बिना डेटा स्क्रैप गर्दछ. वेब फसलले एक घण्टामा ठूलो संख्यामा वेब पृष्ठहरू प्रशोधन गर्न सक्छ र अनुकूल जावा पुस्तकालयहरू द्वारा पूरै हुन्छ. यो सेवा यसको सुव्यवस्थित सुविधाहरू र उत्कृष्ट निकासी क्षमताओंका लागि व्यापक रूपमा प्रसिद्ध छ.
जरिको HTML पार्सर:
जेरिको HTML पार्सर जाभा लाइब्रेरी हो जसले हामीलाई एचटीएमएल फाइलको भागहरू विश्लेषण र हेरफेर गर्न दिन्छ।. यो एक व्यापक विकल्प हो र पहिलो 2014 एक्लिपिप पब्लिक द्वारा सुरु भएको थियो. तपाईं भौगोलिक र गैर-व्यावसायिक उद्देश्यहरूको लागि येरिहो HTML पार्सर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ Source .